Ururka Haweenka ee baarlamaanka Aqalka Sare oo doortay Guddoomiye iyo ku xigeeno – Kalfadhi
Waxaa goordhow soo gaba-gaboobay doorashada Guddoomiyaha Ururka Haweenka ee Senatorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya taas oo saakay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Doorashada ayaa ka dhacday Xaruntada fadhiyada baarlamaanka Aqalka Sare waxaana ka qayb galay mas’uuliyiin katirsan Baarlmaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale.
Boosaaska ama xilalka loo tartamay ayaa kala ahaa Guddoomiye iyo laba ku xigeen, Xoghayae iyo Khasnaji
Guddoomiyaha Ururka waxaa u tartamay Senator Jawahir Axmed Cilmi
iyo Senator Samsam Dahir Maxamed, waxaana ku guuleysatay Jawaahir Axmed Cilmi halka ku xigeenka 1aad ay u tartamayn Senator Fadumo Xasan Aadan Gariyow iyo Senator Saciido Xasan Cusmaan, waxaana ku guuleestay Faadumo Xasan Cabdi
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Haweenka Aqalka Sare ayaa waxaa ku tartamay
Senator Nuura Faarax Jamac iyo Senator Deeqa Xasan Xuseen, iyadoo laga guuleestay Deeqa Xasan Xuseen. Xoghayaha ururka waxaa loo doortay Fartuun C/qaadir Karaama oo cidna la tartamin.
“Waxaan idinkaga mahadcelinayaa codkiina iyo kalsoonida aad isiiseen, waxaan idin ballan qaadayaa in aan ka shaqeeyo horumarkiina iyo daryeelka dumarka Soomaaliyeed” ayey tiri Senator Jawaahir Axmed Cilmi oo hadal kooban ka jeedisay Xarunta Aqalka Sare.
Waa doorashadii 2aad oo ay sameestaan Haweenka Xildhibaanada ah ee katirsan Xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Jawaahir Axmed Cilmi ayaa ballan qaaday in ay ka shaqayn doonto horumarka dumarka Aqalka Sare iyo Haweenka Soomaaliyeed.
Haweenka ku jira xildhibaannada Aqalka Sare ayaa tiro ahaan gaaraya 13, waxayna doorashadii tan ka horreysay dhacday bishii December ee Sanadkii 2017, waxaana maanta xilka ka dagaya Shukri Aadan Maxamed oo aheyd Guddoomiyaha Ururka halka Fartuun C/qaadir ay difaacatay booska Xogahaya oo ay ku guuleysatay markii labaad.